Vaovao - Inona ny fitsipiky ny mpanao gazety sivana?
Inona ny fitsipiky ny mpanao gazety sivana?
Ny sivana fanaovan-gazety dia karazana masinina fotsiny, izay manao Filtration & fisarahana mandritra ny asa fanaovan-gazety.
Karazan-tsivana fanivanana: Gazety fanasivanana takelaka sy tabilao, Gazety sivana ao amin'ny efitrano, Press sivana membrane sns
1. Alohan'ny hanokafana ny fizahana fizahana raha mifanaraka ny takelaka sivana ary madio sy milamina ny lamba sivana. Raha tsy madio ny lamba sivana, dia hisy fiatraikany amin'ny fahaverezan'ny rano amin'ny lamba sivana, ary amin'ny farany dia haharitra ny fotoana fanosehana ny fotaka, ary ho avo kokoa noho ny sanda ara-dalàna ny atin'ny rano. Raha tsy voalamina tsara na ketrona ny lamba sivana, dia hofafazana ivelan'ny banga aorian'ny fiakaran'ny tsindry fotaka.
2. Manomboka manindry fotaka
A. Takelaka fanivanana mifangaro Mamoha ny compresseur amin'ny press press, tsindrio ny plate plate filter, ary tazomy amin'ny 25kfg / cm2 ny tsindry.
B. sokafy ny paompy maloto ary fahano ny fotaka ao anaty presse sy ny presse sivana. Aorian'ny fidiran'ny fotaka amin'ny milina fanivanana, eo ambany fanerena tsara, ny rano dia mamaky ny elanelana lamba sivana, milentika ao amin'ny fantsom-piltrate, miditra amin'ny lohataona eo akaikin'ny presse sivana ary mikoriana mankamin'ny fitoeran-drano. Rehefa nitombo ny habetsaky ny fotaka dia nihena tsikelikely ny pores ary nanjary kely kokoa ary nitombo ny tsindry filtration. Rehefa mahatratra 5kfg / cm2 ny tsindry fotaka dia manodidina ny 70% ny hamandoana ao anaty fotaka ary miforona ny mofomamy sivana. Rehefa ampitomboina amin'ny 4kfg / cm2 ny tsindry, sokafana ny paompy ary be loatra ny tsindry. Rehefa kely loatra ny tsindry dia sokafana ny valizy fanamaivanana mba hisorohana ny tsindry be loatra amin'ny paompy volo.
3. Manary fotaka
A. Vohay ny vatan-kazo ary esory ny fotaka Voalohany, atombohy ny milina fanivanana mba hanatanterahana ny hetsika famoretana, avy eo hamaha ny kompà mitazona tsindry, avy eo alefa ny takelaka, sintomy hisokatra ny lovia, avy eo ampidino moramora ilay fotaka miaraka amin'ilay fitoeran-drano ary arotsaho hatrany ambany no ampaosy.
B. Averina averina, fotaka fanerena Rehefa feno ny fotaka indrindra, dia manomboka ny hetsika famoretana. Aorian'ny fanerena dia tazonina ho 25kfg / cm2 ny tsindry. Aorian'ny fanamafisana ny kompà mitazona tsindry, kitiho mba hampitsaharana ny hetsika ary avy eo kitiho mba hikatona.
4. Soloy ny lamba sivana Rehefa misy lakaoly miraikitra ny lamba sivana dia tsy afaka esorin'ny mpanadio tsindry be loatra izany, na simba ny lamba sivana, tokony hosoloina eo no ho eo ny lamba sivana.
A. Esory ny lamba sivana taloha Esory ny takelaka sivana, vahao ny tady manamboatra lamba sivana, esory ny lamba sivana ary manaova fitsaboana fako matanjaka.
B. Soloy ny lamba sivana vaovao Ampandalovina amin'ny lavaka afovoan'ny lovia sivana ny sombin-sivana vaovao, ahodino ny lamba sivana ary apetraho midina ny faran'ny lavaka tady raikitra tsy voafehy, avy eo ampiasao ny tady handalovana ilay mifanaraka ny lavaky ny lamba sivana roa, ary amboary ny sivana roa amin'ilay sivana. Eo amin'ny solaitrabe.
C. Apetraho ireo takelaka sivana ary alamino tsara. Apetraho amin'ny takelaka sivana ny takelaka sivana miaraka amin'ny lamba sivana, ary alamino tsara sy tsara izy ireo. Aorian'ny fanoloana dia azo tsindriana ara-dalàna ny fotaka.